साहित्य प्रोटोटाइप मा किन? सामूहिक तस्बिर के हो?
एक सबै प्रमुख र गौण अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ साहित्यिक को वर्ण काम लेखक द्वारा आविष्कार छैन, र वास्तविक मान्छे देखि कोरिएका हुन्छन्। लेखक को सबै नायक शुद्ध Fabrication थिए भने, यो आफूलाई पाठक रोचक हुनेछ काम गर्दछ असम्भाव्य छ। यो काल्पनिक नायक सिद्ध छ, र यो रोचक छैन।
को प्रोटोटाइप को अवधारणा
प्रत्येक वर्णको साहित्यिक काम वास्तविक जीवन मा एक ट्विन छ। यो एक उत्कृष्ट नमूना, साथी वा नातेदार, र पनि एक रोचक ऐतिहासिक आंकडा सिर्जना गर्न, एक लेखक हुन सक्छ। यी मानिसहरू प्रोटोटाइप साहित्यिक वर्ण सकिन्छ।
साहित्य मा एक प्रोटोटाइप के हो? यो आफ्नो जीवनमा मूल छवि, लेखकले गर्न परिचित छ, वा ऐतिहासिक पुस्तकहरु उधारो गुण र उपस्थिति जो एक साहित्यिक नायक सिर्जना गर्न। एउटै समयमा लेखक, परिमार्जन गर्न यो व्यक्ति को गुणस्तर थप्न एक वर्ण आविष्कार गर्ने अधिकार, छ। लेखक त अक्सर वास्तविक व्यक्ति एक संयोग सम्पूर्ण सही छैन के को प्रोटोटाइप चयन, एक साहित्यिक छवि सिर्जना गर्दछ।
व्यावहारिक साहित्य मा प्रोटोटाइप
अक्सर लेखक को विचार बाटो अन्त गर्न सुरुदेखि जीवन र लेखक को कामहरू निम्नानुसार कि प्रोटोटाइप देखिन्छ। किनभने यो पूर्णतया जीवन शैली र युग को हीरो को मनोवृत्ति अवशोषित यी काम गर्दछ, सबै भन्दा यथार्थवादी छन्। यो प्रोटोटाइप लेखक उल्लेख आफ्नो आत्मकथात्मक लेखोटहरूमा पर्छ।
धेरै प्रोटोटाइप - एक सामूहिक तस्बिर
तथाकथित सामूहिक पनि छन् तस्बिरहरू। यो छ छैन एक को जब नायक प्रोटोटाइप, तर धेरै। एक साहित्यिक छवि बनाउन, लेखक केही मान्छे मा सुविधाहरू विभिन्न लाग्छ। एक सामूहिक तस्बिर छ -। एक हडताली उदाहरण Grushnitski जहाँ एम यू Lermontova "हाम्रो समय एक हिरो", को काम हो।
छोराछोरीको लागि त उत्पादन बन्द र बुझ्ने पाठक बच्चा गर्न बन्दैछ के को प्रोटोटाइप, चयन किनभने मुख्य पात्र - एक बच्चा। युवा पाठकहरूलाई पूर्णतया आफ्नो कार्यहरू बुझे। र वर्ण, छोराछोरी लिएको कसरी थिए गर्छन्? अक्सर, प्रोटोटाइप प्राकृतिक बच्चाहरु लेखकहरू। मा "तेस्रो ग्रह को रहस्य" एलिस Selezneva त्यसैले त्यहाँ थियो, Murochka मा केटी K.Chukovsky काम गर्दछ।
लुईस Kerolla Alisa को छोरी "एलिस Wonderland मा" को काम मा मुख्य पात्र को प्रोटोटाइप भयो। अक्सर भन्नुभयो कथा अविश्वसनीय र धेरै रोचक देखिन्छ, र वर्ण 'नाम मूल र आफ्ना मित्रहरूको नाम संग एकै समयमा पर्नु। कहिलेकाहीं पाठकहरूलाई प्रोटोटाइप देख्न सक्छौं। कामहरू को विश्लेषण दिन सक्छ के हो? साहित्यिक काम पढेर, म के व्यक्ति को प्रकारको लेखक तिनीहरूले कसलाई सदृश नायक, बन्द लिखित छ संग जान्न चाहन्छु। यो विचार र पाठ को विषय महसुस गर्न मद्दत गर्छ।
तर प्रोटोटाइप (यो अवधि के गर्छ, हामी माथि छलफल), यो आफ्नो नाम प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीं पाठकहरूलाई मात्र अन्दाज लगाउनु र एक नायक को प्रोटोटाइप बारेमा theorize गर्न आवश्यक छ।
वारियर्स चौकी के हो? जहाँ रूसी आत्मा जागा छ ठाउँ।
कवि Yakov Polonsky: संक्षिप्त जीवनी, कला, कविता र रोचक तथ्य
मङ्ग "विषाक्त मसरुम": केटी को परिवर्तन को इतिहास
क्लासिक अंग्रेजी साहित्य: उपन्यास "द Headless Horseman", को एक सारांश
एक ल्याप्टप लागि के राम्रो मोडेम? सुझाव र चाल।
जूलिया Vysotsky देखि tiramisu लागि चरण नुस्खा द्वारा चरण
भूमि कानून, विधि र अवधारणा को विषय
मास्को मा आपतकालीन अवस्थाहरू मन्त्रालय संस्थान। मास्को मा संस्थानहरुमा को ठेगाना। आपतकालीन अवस्थाहरू मन्त्रालय को Ivanovsky संस्थान
गोल्डन रिंग होटल: बाटोको ज्ञात र गैर-मानक होटल प्रतिष्ठान
धातुहरूको कठोरता। धातुहरूको कठोरता तालिका
मीठाको लागि समुद्री: नुस्खा
को भित्री निम्ति बत्ती कसरी चयन गर्न
"Uni" को जनवरी Semakina: तस्बिर, अभिनेत्री को वर्तमान नाम
कसरी जंग मा घाँस हटाउन: निर्देशन र टिप्पणीहरू
Maltipu - एक लघु कुकुर नस्ल